Boosaaso:, Dawlada Hoose oo burburisey goobo ganacsi. – Radio Daljir
Diseembar 4, 2012 5:10 b 0
Boosaaso, Dec 4. Dawlada Hoose ee degmada Boosaaso ayaa maanta samaysay hawlgal lagu burburinayo goobo sharci daro ah oo laga hordhisay Maxakamada Degmada Boosaaso iyo qaybta dadka dhimirka ka xunuunsan ee Cusbitaalka magaalada Boosaaso.
Goobaha la burburiyey waxaa kamid ah Suuqa Faarada oo lagu sameeyo adeegyada guryaha sida, Sariiraha, Fadhiyada iyo Kuraasta, Dawlada Hoose ayaa sheegtay in suuqaasii si sharci daro ah loo dhisay oo wadooyinka ay soo galeen.
Cabdsalaan Axmed Gurxan xoghayaha Dawlada Hoose ee degmada Boosaaso oo la hadlay Radio Daljir xiligii uu socdey hawlgalka Burburinta, wuxuu sheegay in arintani ay soo dedejisey kadib markii dadku ay buuxiyeen wadooyinka Cusbitaalka iyo Maxkamada Degmada.
Qaar kamid ah dadkii laga burbiryey goobahooda ganacsi oo la hadlay Codbaahiyaha Radio Daljir ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin go’aanka Dawladu qaadatay, Siciid Saalax oo kamid ah dadkii dhismayaasha laga dumiyey ayaa tilmaamay inuu ku qanacsan yahay arintan.
“Anagu muwaadiniin baanu nahay waana ku qanacsanahay wax walba oo Dawladu samayso waxaana Dawlada ka codsanaynaa inay meel kale na geyso,” ayuu yiri Siciid Salaax.
Hawl galkan ay maanta qaaday Dawlada Hoose ee degmada Boosaaso ayaa kadanbeeyey markii ay xirmeen wadooyinka loo maro qaybta dhimiska ee Dhakhtarka Boosaaso iyo xarunta Maxkamada Degmada Boosaaso.